Mpanjifa vaovao tonga ao amin'ny Apple miaraka amin'ny Mac sy iPad | Avy amin'ny mac aho
Ny fahazarana mividy mpampiasa dia miova ary mazava ho azy fa tsikaritra ao amin'ny Apple ihany koa izany, bebe kokoa taorian'ny valim-bola azo tamin'ny telovolana teo aloha. Ireo mpampiasa vaovao izay tonga ao amin'ny Apple matetika dia manao izany amin'ny vokatra toy ny ny iPhone, ny iPod Touch na ireo izay manana ny vidiny novaina kokoa.
Amin'ity telovolana farany ity, ny orinasa dia mandray angon-drakitra manan-danja ary izany dia 50% amin'ireo mpanjifa Apple vaovao no nandefa ny fividianana Mac na iPad. Ary tena zava-dehibe amin'ny orinasa izany satria manova ny fomba hahatratrarany mpanjifa vaovao.
Ora vitsy lasa izay dia nanokatra ny famandrihana ny iMac vaovao 24-inch i Apple, ny Apple TV vaovao ary ny iPad Pro vaovao ka azo vinavinaina fa hanomboka hividy ireo ny mpampiasa maro. Amin'io lafiny io, manafoana ny fandefasana toa an'i Apple amin'ity taona ity. afaka manome tosika ara-toekarena anao isaky ny telovolana ary io dia aorian'ny iPhone dia toa mahazo mpampiasa ny Macs fa amin'ny farany dia mahazo vola ho an'i Apple.
Ny vidiny mafy an'ny iMac 24-inch vaovao, ny fanombohana ny iPad Pro nandrasana hatry ny ela ny fanatsarana ary na ny M1 Chips izay ananan'ireo Macs sasany ary angamba ny isan'ny AirTags izay amidy, dia mety hitarika an'i Apple amin'ny firaketana vaovao ny vola miditra mandritra ity telovolana ity. Saingy ho hita izany amin'ny fotoana fohy, ny mazava dia ny manohy manatratra mpampiasa vaovao ny orinasa ary amin'ity tranga ity mpampiasa vaovao izay manomboka amin'ny Mac sy iPad ho fitaovana voalohany an'ny orinasa.
Làlana feno mankany amin'ny lahatsoratra: Avy amin'ny mac aho » Solosaina Mac » iMac » Mpanjifa vaovao tonga ao amin'ny Apple miaraka amin'ny Macs sy iPads
Aza mampiasa AirTags hitadiavana biby fiompy na ankizy